Vaovao avy amin'ny tanana
Rafitra Rail Urban
Samsun Metropolitan ben'ny tanàna Mustafa Demir dia hilalao rahampitso amin'ny 13.30, hanenjika ireo mpankafy izay handeha any Yılport Samsunspor - kilalao Fanatanjahantena Amed Sportive, eo anelanelan'ny 10.00 - 16.30 [More ...]
Ekipa mpiady oram-panala sy oram-panala, mba hahazoana antoka fa tsy ho voaelingelina ny lamasinina noho ny toetr'andro mangatsiaka sy ranomandry izay mahomby amin'ny Faritra Anatolia Atsinanana. [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan dia nilaza fa, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina TÜDEMSAŞ-tsy miankina dia 400 mahery no hitondra entana ho an'ny orinasa GATX any Australiana. [More ...]
Ny orinasa Shinoa Railway, izay mahatonga ny ampahatelon'ny tambajotra hafainganam-pandeha avo lenta tao anatin'ny 10 taona farany teto amin'izao tontolo izao dia nihaona tamin'ny anglisy. Ny orinasa dia eo amin'ny zotra 420 kilometatra any Angletera [More ...]
Pakistan-Tiorkia High-Level Strategic Cooperation Council VI. Ny fivoriana dia natao tao Islamabad, renivohitr'i Pakistan, teo ambany fitarihan'ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Fihaonan'ny vondrona mpiasa momba ny fitaterana izay natao teo anatrehan'ny Filankevitra, [More ...]
Tamin'ny taona 2017, ny orinasa frantsay Alstom dia nanandrana nanambana tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny alika, Siemens AG. Na izany aza dia nosakanan'ny vaomiera eoropeana io fisintomana io tamin'ny taona 2019. amin'izao fotoana izao [More ...]
İntek Kalıp ve İskele no mpiara-miasa vahaolana amin'ny Darüsselam - Morogoro sy Morogoro - Dodoma - tetikasa Railway Makutupora any Tanzania, lalana voalohany amin'ny fiaran-dalamby any Afrika Atsinanana. [More ...]
Thales dia nandresy ny volavolan-dalàna ho an'ny fanitarana ny ambanin'ny tany ambanivohitra any Sydney ao amin'ny tanàna sy any atsimo andrefana, ary nanao sonia ny fifanarahana Central control and Communications. Ny fanitarana ny rafi-pitantanana ivotoerana sy ny serasera ao Sydney Metro [More ...]